Nzira Yokuwana Basa muDhailand mu 2020 🥇 【# No.1Guide】 Kubatsira Expats!
Iwe kunyange tanga kutsvaga kana iwe uchangowana dzimwe nhau nezve mabasa eDubai. Uye iwe uri mutsva kumusika webasa muUAE. Unofanirwa kutanga watanga kambani hombe kutanga. Uye mushandirwi akanakisa muDubai achiri Emirates.
Dubai City Kambani inogara ichipa ruzivo rwakanaka. Ino nguva isu tinopa ruzivo rwekuti ungapfuura sei Emirates Cabin Crew Open Day / Kuongorora + Bvunzurudza (Matipi ekunyorera + mibvunzo)
Kuwana basa kunyanya muUnited Arab Emirates zvinogona kutora nguva. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti vanhu vari kubatira kutenderera vakatenderedza mazana ezvinyorwa zuva rega rega. Uye zvechokwadi vanhu vari kunyatsoshanda mukambani yeEmirates. Ini handinyatsoziva nezvako. Saka ivo vanozofanira kutarisa CV yako ruzivo uye seyako, yako yemunhu dzidzo uye izvo zvichavatendera kuti vazive zvakati wandei pamusoro pako uye unoitei muhupenyu hwako.
Saka gara uine chokwadi kuti iwe uchatevera gwara redu pazasi. Nekuti izvo zvatinoita chaizvo kune Vanotsvaga basa isu tiri kuedza kubatsira iwe unowana zvakawanda sezvaunokwanisa maererano nebasa rekutsvaga muDubai uye Abu Dhabi. Isu tiri kupa mamwe matipi uye ruzivo nezve mabasa uye maitiro ekugadzirisa sei kunyorera kune vanogona kuve Vashandi muUnited Arab Emirates uye kunyange dzimwe nguva mudunhu reGulf.
Just to make sure uchaita uve neruzivo rwakanaka uye rwakakwana. Isu tiri kupa ruzivo rwako rwekuita kwako kunyorera Emirates nenzira kwayo.
Muvhidhiyo iyi, unogona kuwana muenzaniso weKuzadza Emirates Cabin Crew Online Job application pane yavo Webhusaiti nzvimbo (iyo link ndeye - http://emiratesgroupcareers.com/engli…).
Maitiro ekushandisa akakosha kwazvo mukutsvaga kwako basa. Iwe unofanirwa kugara uine 100% yechokwadi kuti yako application isingaite isina maruva maererano nezvinodiwa pakuunganidza. Iva nechitarisiko Pazasi paYouTube movie. Uyu murume akagadzirwa kwevanotsvaga basa uye vanhu vanobva kupote nyika vasingazive nzira yekuzadza kunyorwa kwekambani yeEmirates. Kungoti nekuti chinhu chakaomesesa kuita saka vamwe vanhu vanobatsira vamwe vanhu kuzvibata ivo pachavo nekupa nekuti imi vakomana ruzivo rwakanaka nezve maitiro ekuita izvozvo nenzira kwayo. Uye izvo zvinokutendera iwe kuti uwane yako kunyorera pamberi pevamiriri vekunyorera mukati kambani hombe muUnited Arab Emirates.
Chokutanga, Ita CV Yakanaka
A CV yakakwana, kana chii?
Iwe unotumira yakafanana CV, kunyangwe iwe ukanyorera nzvimbo dzakasiyana? "Wholesale" kupindura kushambadzira anogona kuderedza kushanda kwekutsvaga kwako. Kiyi yebudiriro ndiko kusarudzwa kweruzivo uye kuratidza kwechokwadi chiri chakanyanya kukosha kune anogona kuve mushandirwi.
Kutenderera zvekare ndeimwe yezvinyorwa zvakakosha. MuEmirates, pakutanga, ichi ndicho chete gwaro izvo zvinogona kuponesa hupenyu hwako. Huye, expats kazhinji achitaura haateereri kutangazve uye nemavara evhavha mavara. Ichi ndicho chikonzero Dubai City Kambani kuisa gwara rekuti ungawane sei Job muDubai mu 2020 ?.
Mhinduro yako kune chinopihwa inogona kunge iri chiratidzo chekuzvipira nehunyanzvi. Izvo zvakakosha kuti iwe uratidze kuti unosangana nezvinotarisirwa kumushandirwi muDubai. Munguva yekuongorora kushambadzira, une mukana wekusarudza kana iwe uine gadziriro yakakodzera uye kana iwe uchigutsikana nemamiriro ezvinhu anopiwa newe mushandirwi.
Iwe unofanirwa kuyeuka kuti mune UAE. Pane zviuru zvea expats vari kutsvaga mabasa muDubai kana Abu Dhabi. Kana iwe uchifunga kuti iwe uri mumiririri akakodzera, zviratidze ruzivo nezve iwe munzira yakajeka uye yekufunga.
Chinokosha pakugadzira unyanzvi huripo ndezvekuongorora basa
Tiri kutsvaga nyanzvi ...
Kambani yedu iri kutsvaga Madhigiri muDhailand
Usati wapindura kushambadza, funga kana iwe uine hunyanzvi hwekuita mukana wakananga kuita. Paunenge uchiongorora. iwe unogona kusvika pakufunga kuti zvakakodzera kutanga basa, semubetseri.
Gara uine chokwadi chekuti uri kunyorera kushambadzira kwakakodzera basa. Semuyenzaniso, kutumira CV yako kuzviuru zveVashandi uyo angatsvaga chiremba wemazino uye ruzivo rwako mukutengesa hazvibatsire zvachose.
mabasa apo iwe uri kutsvaga basa
Nekuongorora chiyero chemabasa akapiwa chinzvimbo, unogona kuona kana uchizokwanisa ita mabasa ako zvinobudirira uine ruzivo uye kugona kwako. Kana zviito zvakatorwa mumakambani apfuura zvikapindirana nezvinodiwa zvakaziviswa mukuzivisa, ipapo unazvo mukana wekusangana nebasa rako idzva. Izvo zvakakosha kuti uratidze muCV yako kuti une ruzivo rwakakosha uye hunyanzvi.
A mashoma x-gore ruzivo mune imwe nzvimbo yakafanana. Zvinoitika kuti vashandirwi vasingatarisire chiitiko. Mumamiriro ezvinhu aya, zvakakodzera kutarisa nezve kurondedzerwa kwedzidzo uye hunyanzvi. Kazhinji kazhinji, zvisinei, kudzidzira kunokosha.
Kuti uratidze kuti wakambobata zvinzvimbo zvakafanana nezvauri kunyorera izvozvi, tsanangura nhoroondo yako yebasa nekupa zita rebasa, nguva yebasa, uye basa. Izvo zvakakosha kuti izvi zvirimo zvienderane nemabasa anoratidzwa mune basa rekupa.
Dzidzo ... / mvumo ...
Mukoti, injiniya wekuvaka, mudzidzisi - iyi mienzaniso yehunyanzvi hwakarongedzwa, kureva izvo izvo zvinogona kungoitwa chete kana uine kodzero. Zvakare mune mamwe maitiro, sekunge PR mushandi, mutengesi kana programmer, mushandirwi ane kodzero kutarisira dzidzo yakati kubva kumumiriri.
Izvo hazvina kukosha chete kuti ndeipi nzira yekufunda iwe yaunopedza. Izvo zvakakoshawo kutaura makosi uye zvidimbu zvekudzidziswa panguva iyo iwe wawakawana uye nekukudziridza hunyanzvi hunodiwa pabasa. Sa graphic artist, iwe unogona kunyora, semuenzaniso, nezve chirongwa chekubata makosi, akadai saAdobe Photoshop, InDesign kana Corel Draw. Kana iwe uchinyorera kutumira kwemudzidzisi wega, zvidzidzo zvekupedza kudzidza mumunda wezvekudya, nezvimwe zvichabatsira.
Zivo yemapurogiramu emakombiyuta akadai se ...
Zvitupa zvinogona kushandiswa kupa chaiwo hunyanzvi hwe software. Portfolio yakasungirirwa paCV yako inogona zvakare kushandiswa kuratidza kugona kwako.
Zivo yerurimi rwekunze kune imwe nzvimbo ...
Izvo zvakakosha kuti iwe unodudzira mwero wekufambira mberi - izvi hazvishande chete kune kugona kwemitauro, asiwo paruzivo rwezvirongwa zvemakomputa. Kuti uwane kuvimbiswa kwehunyanzvi hwemutauro, zvakakodzera kupasa bvunzo dzechitupa. Sechikamu chekugadzirira, iwe unogona kuenda kune imwe nguva iwe yauchadzidza, semuenzaniso, bvunzo mazano.
Kukurukurirana, kugona kuzvibata munguva… - hunyoro hunyanzvi Zvakakosha kuti utarisire kuti, semhedzisiro yekuongorora CV yako, uyo anogamuchira akawana kuti iwe, semuenzaniso, wakarongeka. Kusimbiswa kwehunyanzvi hwakadaro pamwe kunyange iyo sangano remakonferensi kana kusanganisa basa uye zvidzidzo. Izvo zvakakosha kusiyanisa izvo izvo zvakanyanya kuwirirana neiyo yekambani yekurongeka tsika kubva kune yakapfava hunyanzvi hwauinadzo.
Paunenge uchigadzira CV, zvakakodzera kutaura nezvekuwedzera, kusarudza zvinodiwa zvinotaurwa nemushandirwi. Ichi chichava chinhu chinogona kusarudza kuti uchagamuchirwa kubasa.
Kana iwe uchizoona - Tinopa mhizha yemabasa mu Dubai ...
Paunoverenga chikamu chekupedzisira chechiziviso, une mukana wekuona kana mamiriro akapihwa nemushandirwi akakubatsira kuzadzisa zvinangwa zvako. Kana iwe uchifunga hongu, zvakakodzera kutaura mune pfupiso yeunyanzvi.
CV yakanatswa inogona kukupa iwe kubvunzurudza uye nekudaro donhedza chokwadi chekuti iwe uchagamuchirwa kubasa. Huwandu hwemaCV atumirwa mukupindura kushambadza hahusi; chinonyanya kukosha ndeye mhando yavo. Searches iripo inoshanda zvakanyanya kana CV yako yakagadzirirwa munhu. Paunenge uchigadzira gwaro, zvakakodzera kutora hanya kwete chete zvemukati asiwo fomu - yakachena uye pachena. Iwe uchagadzira gwaro rehunyanzvi kushandisa makambani eDubai CV mugadziri.
Ndeipi CV inovimbisa kubudirira mu2020?
Kusika asi zvakadaro concretely. Dzazvino, asi dzakabatanidzwa neyechinyakare fomu. Pakutanga, asi nekureruka. Zvinoshamisa, asi kwete zvinonyadzisa. Nenzira chaiyo, izvo hazvireve kufinha. Tinokupa zano kuti unozorodza sei CV yako mugore idzva kukwezva kutarisisa kwevashandi.
Unotumira maficha zuva rega rega, asi hapana mhinduro .. Iwe hauzive kuti dambudziko nderei? Pamwe unofanirwa kutarisa zvakanyanya paCV yako, uye zvakanaka kana iwe ukamupa kune mumwe munhu kuti averenge kana kunyatsoziva mutauro wechirungu. Maererano nenyanzvi dzeHR, tsika iyi yakakosha kwazvo. Kazhinji, zvinyorwa zvekushandisa zvizere nemutauro, stylistic, kuperetera uye typo zvikanganiso.
Kunyanya, chizvarwa cheYI zvino chinotarisa pane yekugadzira zvakare, asi kukanganwa kuchengeta mitemo yekuperetera chaiyo uye kugadzira zvikanganiso zvegrammatical - taura, John Smith, CEO weDubai City Company
Chinhu chinopfuura chidimbu
A CV iri muchimiro cheshambadzo rakashambadzirwa, bhuku rekunyaradza kana vhidhiyo. Zviri mukati inoratidzwa nenzira yezvifananidzo, zviratidzo, mifananidzo. Simbisa pane infographic. Mafashoni akadaro ave kuoneka mumashandisirwo. Vazhinji vanhu vazhinji vanobata CV yavo sechipo kupfuura segwaro.
Kutenda kwakadai kunogamuchirwa kwazvo, asi pamamiriro ekuti kunze kwekushongedza uye kurasikirwa chimiro, pachave zvakare neruzivo rwakakosha. Kune anodzorera, kubuda pachena kwakakosha, chaiyo data pamusoro kupi uye pakashanda mumwe munhu, izvo zvaakaita, mabasa api aaive ave nawo uye neicho ruzivo chaakange awana.
Kujaira kupfupisa CV hakuunzi kuunza zvinobatsira mhinduro - anotsanangura John. Mukufunga kwake, pfungwa inonakidza ndeyekugadzirira CV mune yechinyakare fomu uye inosanganisira chinongedzo kune ako mapurojekiti, portfolio kana webhusaiti iwe unogona kuona iyo grafiki yekuvandudzwa kwegwaro, semuenzaniso semufananidzo.
HR nyanzvi dzinonzwisisawo-pamusoro-kubhadharisa neunyanzvi hunyanzvi. - Havasi vese vanogamuchira vanogona, semuenzaniso, kushandisa QR macode uye mafoni ekushandisa ayo anotendera kuverenga maCV. Zviri nani kuitisa sekuwedzera, chimwe chinhu chakawedzera kudarika chakagadziriswa mhinduro - inosimbisa John Smith.
Unogona sei kumira mushe pakati peboka revanhu? Chii, kunze kwemaficha, riri pamusoro izvozvi?
Iwe pachawe webhusaiti - tinogona kuisa mamwe mashoko pamusoro payo kupfuura muCV yemagariro, kuratidzira mafungiro ako uye unyanzvi.
Maakaundi pazvikorekedzo zvekunyorera (seyakafanana neiyo My Work account) ndeimwe idzo nzvimbo pawebhu dzinotibatanidza nevanogona kuita maboss. Izvo zvakafanira kumatsiridza ako magwaro pano ne gore idzva.
Iyo CV iri muchimiro chevhidhiyo - iyi nzira inonakidza yekuratidzira kambani yako yemaroto, asi kana isu tichinzwa kutya pamberi pekamera, tine matambudziko nedimikira uye kutaura, kutaura wakasununguka - usazvimanikidza kune iyi fomu yekushandisa.
Nhau dzezvemagariro - vakashanyirwa nevakuru vemahedheni, saka zvakakodzera kutora hanya yehunyanzvi runomhanya profil. Kwete chete indasitiri yemagariro vezvenhau inogona kubatsira pakutsvaga basa. Dzimwe dzenyaya dzebasa ravo dzinopiwawo paFacebook.
Kutsanangura zviitiko kana mapurojekiti atinotora chikamu, kugovera kubudirira kwehunyanzvi -Tinogona kurodha maziso evatengi. Hapana chinhu nechisimba
Kucherechedzwa kweHR kweDubai Jobs Market kunoratidza kuti kusika, kusawanzoitika kunoitika zvakare mumaindasitiri akasiyana siyana. Vanogona kurohwa nekunyorera nzvimbo dzinoda kutungamira uye hunyanzvi, sekushambadzira kana kushambadzira nyanzvi, nyanzvi mukushandira vatengi kana nharembozha programmer, anozopa CV yake, semuenzaniso muchimiro chemutambo wecomputer kana webhusaiti. Saizvozvowo, iyo infographic ichaita shanda mune chero imwe nzvimbo yekugadzira.
Nekudaro, kana isu tikasanzwa takasimba zvakakwana kuti titaure nezve yedu nyanzvi yekuita muvhidhiyo kana kudhirowa bhuku renyaya - rega tingozvirega uye ngatiregei kungotevera maitiro. - Dzimwe nguva kutangazve ingori kopi yekusaziva, kudzokorora kwetemplate. Kushatisa mashandiro emapuranga chete mumiriri - John Smith anotarisa.
Wakangwara Asi Ichokwadi - Leaflet panzvimbo yeCV!
Kutambanudza tumapepa hakufanirwa kunge kuri kweimwe nguva yebasa! Inogona kuva nzira kutsvaga basa kuEurope. Zvakaratidzwa naDawid Dąbrowski muzvinabhizinesi wePoland uyo akapa mapepa achizvizivisa semumiriri webasa pasi pezvivakwa zvehofisi yeWarsaw.
Pracuj.pl inobvunza David kana zano rakaitika kurohwa uye akawana here rake hope basa.
Nzira dzakagadzirwa dzekuwana basa dzinogona kunge dzakasiyana. Apo vamwe vanhu vanoisa mapepa nemifananidzo yavo kana kuti vanoita fanpages pa Facebook, David akasarudza ... mapurisa! Yakashanda here?
Wangauri kutsvaga basa nenzira isiriyo ...
Dawid Dąbrowski: Ini handizive kana zviri zvisiri zvachose. Ndine fungidziro yekuti nzira yandaishandisa inozivikanwa zvakanyanya, kunyangwe hazvo vanhu vanoishandisa kutsvaga basa hakuwanzo kuwanikwa.
David.: Ini ndakangoburitsa mapepa (anoseka). Asi kwete chero mapepa. Ini ndakaratidzwa kwavari mumapikicha ehunyanzvi, nekuwedzera ini ndakaisa nzira dzekutumira kwandiri uye QR code kune rimwe divi reshizha. kutungamira kune yangu nyanzvi chimiro, uye kune rumwe rutivi kune multimedia inotangazve. Huye, ini ndanga ndichipa kwete chete chero, nekuti pakati pe8 ne9: 30 mangwanani kumasuo ekunze kune makuru mahofisi ehofisi muWarsaw, vashandi vanorara vane kunyemwerera pamiromo yavo. Vazhinji vava, mushure mekugamuchira tsamba iyi, vakanyemwerera.
Iko pfungwa yeiyi iyi yakabva kupi?
David.: Ini ndinofarira kuita zvinhu zvakadaro! Ini ndaitsvaga basa mukushambadza. Neichi chiitiko ini ndaida kuratidza kuti ndinogadzira, funga conceptually, mazano angu akatarisana nekuzadzisa zvinangwa zvakati uye kuburitsa chaiwo manzwiro. Fomu raifanirwa kuratidza iro Ndiri mushandi wekurota wekambani yese. Uye zvakare, hapana kana chakashata pakutsvaga basa sekusaita uye kumirira maemail asingayerere. Ini ndaida kuita chimwe chinhu chekugadzira, buda mumadziro mana. Chaive chiitiko chikuru.
Zvisinei, iwe unofanirwa kuisa mune imwe sarudzo ...
David.: Mapepa akagadzirwa neni, mapikicha akatorwa neumwe wangu mutorwa mifananidzo mushure mekupepeta, ndakagadzira hunyanzvi hwekuita uye iniwo ndakaitisa multimedia CV ini, asi kudhinda kwacho kwanga kwatotumirwa imba yekudhinda. Zvakare, mutengo wacho wanga usina kunyanya kukwirira, kunyangwe yaive yekudyara kuPNNNNX. Ini handigoni kuramba kuti maitiro ekugadzirira mapepa ega zvakanditorera anenge mavhiki matatu ebasa rezuva nezuva mushure memaawa mashoma. Asi zvaive zvakakodzera kushandisa nguva ino.
David.: Mhedzisiro yacho yaive yakanaka. Kunze kwemhinduro yakananga kubva kune vanogamuchira mapepa, ayo ainyanya kunaka, ndakagamuchira yakawanda mae-mail nekutenda kune iyo pfungwa. Zvaive zvakakosha kwandiri nekuti kana munhu achitsvaga basa, kazhinji haanzwike.
Ndiko kwaive kukurudzira kwaidikanwa. Ndakaita huwandu hwemapepa e1000, ndakakwanisa kupa mazana mashanu muvhiki nehafu, uye ipapo handina kuzopa imwezve, nekuti mazuva mashoma mushure mekutanga kwemushandirapamwe ini akatanga kukokwa kuti abvunzwe. Paive nehuwandu hwegumi nemaviri, mamwe acho emakambani makuru muPoland.
Wakawana sei basa?
David.: Zvingaite sezvinokatyamadza, asi Ndakawana basa nekutenda kuDubai City Company (inoseka). Kunyangwe ini ndakagamuchira akati wandei mabasa kuvonga pamapepa, yaive kuburikidza neDubai City Company ndiyo yandakasangana nemushandi wangu wazvino. Ndiye iye akandipa zvakanakisa mamiriro uye ini handina kuzeza kuita sarudzo yekushandira kambani yangu yazvino.
Kana paiva nechido, iwe ungadzokorora chiedza ichi here?
David.: Ini ndichaita zvese kudzivirira izvi zvinodiwa, asi kana ndikamanikidzwa kuita kudaro, ndichaita chimwe chinhu chinotonyanya kushamisa. Ini ndinofarira kuita zvinhu zvisina kuitwa nevamwe!
Izano ripi iwe ungapa kune avo vanotsvaga basa muEuropean nhasi?
David.: Dai ndakadaro kubata nechimwe chinhu, icho chingave icho. Ita zvinoitwa nevamwe, tenda mukati mavo uye kuti kana iwe ukaisa kushingairira kwako kose, tarenda uye nguva mune chimwe chinhu kunyange chakareruka imwe, iwe unogona kuita zvakawanda.
8 zvinhu zvinoita kuti zvive zvakaoma kuwana basa
Chipinganidzo kuti uwane basa kunogona kunge kushomeka kana kushomeka. Zvakawanda zvinoenderana zvakare nemafungiro ako. Fungawo zvakare kana kushomeka kwemavhiza kubva kune vanochera zvisiri kukonzerwa nekutumira iyo isina-munhu CV.
1. Kuzvipira kudiki pakutsvaga basa
Zvinetso mukutsvaga basa zvinogona kunge zvichikonzerwa nekubatikana zvakanyanya, semuenzaniso, zvisingaitirwe kutumira CV yako. Izvo zvakakosha kuti uongorore zvakarongeka mabasa, semuenzaniso pane Bayt.com portal - kushandisa iyo mobile application inokubvumira kuti uongorore kushambadza chero kupi, chero nguva. Usati watumira CV, uve nechokwadi chekuverenga izvo zvevashandisi uye ita kuti CV yako inyatsoenderana neizvozvo inopihwa. Kana mabvumirano ako asina kukwana kune zvakawanda zvinopihwa, urwu ruzivo rwakakosha -Unofanirwa kutarisa nezvekuvandudza kugona kugona kutsvaga basa muindasitiri yaunofarira.
2. Zvikanganiso uye kukanganisa muCV
Angave mushandirwi inogona kutya zvikanganiso muCV yako. Ndokumbirawo mutarise zvirimo nokungwarira musati matumira gwaro. Ndapota cherekedza kuti hapana typos, zviperengo kana kukanganisa kweiyo stylistic.
3. Kwete zvakakodzera data iri muCV
Kuomerwa kwekutsvaga basa kunogona zvakare kuve kusakwanisa kwekubata newe. Nharembozha uye e-mail kero dzinofanirwa kuverengerwa muCV. Kana iwe kanganwa nezvazvo, iye anogamuchira haazokwanisi kupindura pachishandiswa chako.
4. Inzvimbo isina kukodzera kero yemugwaro
Usati watumira CV yako, gara uchitarisa kuti wakanyora email kero yakakodzera. Zvichida kambani haisi kupindura chikumbiro chako nekuti - semuenzaniso, nekuda kwetsamba isiriyo - haina kugamuchira magwaro akakodzera zvachose.
5. Hapana ruzivo rwakakwana runodikanwa
Chipinganidzo mukutsvaga basa zvinogona zvakare kuve kutadza kuzadzisa zvinodiwa zviri pamutemo. Kana kambani yako ichida ruzivo rweGerman uye iwe uchingosheedzera Chirungu, umiriri hwako hunogona kurambwa. Usati watumira CV yako, ita shuwa kuti hunyanzvi hwako hunoenderana nezvinotarisirwa nemushandirwi.
6. Kushaiwa ruzivo / kukwirira zvakakosha
Kuomerwa kwekutsvaga basa kunogona kukonzerwa nekushaiwa kwenyanzvi yekuziva kana yakawandisa zvikwanisiro. Kana iye anenge achitsvaga arikutsvaga munhu aine makore mashoma e3 ezviitiko, zvimwe haangashevedze mumiriri achangopedza zvidzidzo zvake. Dzimwe nguva, ruzivo rwakawandisa rwunotadzisa.
Waunoshandira anoziva kuti mabhesiti ako anopfuura ake zvaanoda anotya kuti iwe uchakurumidza kurega kushanda kutsvaga matambudziko akakura uye mikana yehunyanzvi.
7. Maitiro asina kunaka panguva yehurukuro
Yakashanda - yako CV kufarira uyo anodaira kwakakwana kuti akakukoka iwe kubvunzurudzwa. Mhedzisiro yayo inoenderana nemafungiro ako - kana ukatadza kuita zvakanaka, iwe ucharasikirwa nemukana wako webasa. Kuchengeta kwako nguva, ruzivo rwezvinoitwa nekambani uye zvinangwa zvebasa rakakosha.
Iwe unogonawo kukumbirwa kugadzirisa basa, saka gadzirira kuzviita. Kana pasinei nekuedza kwako, iwe haugamuchiri basa raunopa, ita mhedziso - zvichave zvichibatsira kubvunza muchengeti wemhinduro pamusoro pekubvuma kwako. Zvichida mumwe munhu anotsvaga chinzvimbo chaakapiwa akaratidza kukodzera kwakanaka kune sangano rehurumende.
8. Kusatenda kwekutenda mune unyanzvi hwavo
Kana hunyanzvi hwako neruzivo rwako zvakafarira uyo unogamuchira, zvinoreva kuti une mukana wekutora chinzvimbo. Nekuratidza kusagadzikana kwako, kushaya kuzvivimba uye kutya mapurojekiti, unogona kupotsa mukana wako wekushanda. Kuti uwedzere kuzvivimba kwako, funga nezve kugona kwako uye zvaunokwanisa - zvinoitirwa kwavari izvo iwe unogona kukumbundira rako reroto basa.
Ndingaita sei muchidimbu ini nehupenyu hwako hwehutano zvakajeka, asi zvishoma?
Iyo CV inofanirwa kuve pfupiso yezvawakawana kare. Izvo zvinofanirwa kufunga nezve tsananguro ye ruzivo rwehunyanzvi uye hunyanzvi. Mazwi matatu akakosha: zvakananga, zvine mufungo uye pane chinyorwa.
Zvinonyanya kukosha zvebasa reCV
CV ndiko kuratidza kwako. Izvo hazvifanirwe kunge zvichingove pachena uye zvakanyanya compact sezvinobvira, asiwo zvakasununguka kubva kune ese marudzi ezvikanganiso - zvakakura, kuperetera uye stylistic. Izvo zvakakosha zvinhu izvo iwe zvaunofanirwa kuisa mune yako kutenderera zvakare zvakawedzerwa pazasi.
ICV inofanira kunge ine zita nezita rechiremera, pamwe nemashoko achakubatsira kuti utaure naye: nhamba yefoni uye e-mail. Zvakakosha kushandisa kerosi yepamusoro e-mail.
Iyo CV inofanirwa kuve nerondedzero yezvakambogariswa zvigaro - kunyanya izvo zvinoratidzira ruzivo rweindasitiri. Izvo zvakafanira kuvatsanangurira muchidimbu, vachitaura chiyero chemabasa. Nzvimbo dzinoshandirwa dzinofanirwa kuiswa mutsara inoteedzana nguva - kutanga nebasa rekupedzisira raitwa.
Ichi chikamu chezvekutangisa chinofanira kuve neruzivo pamusoro pazvo, pakati pedzimwe ruzivo rwezvimwe mitauro ekunze uye hunyanzvi hunhu Izvo zvakakoshawo kutaura zvinyoro nyoro - kunyanya izvo izvo zvichabatsira mune rinogona basa.
Rwendo rwemakore akapedza uye zvigwaro zvakawanikwa
Kana iwe ukapinda muchidzidzo chakawedzera uye dzidzo - nyora nezvazvo muCV yako. Tarisa zvakanyanya pane izvo zviitiko izvo zvinogona kubatsira munzvimbo yauri kufarira.
Taura kuti unyanzvi hupi
Kana iwe uri mubishi kugadzira CV, iwe unogona kunyora mashoma mashoma nezve chinangwa chako chebasa. Paridza zvirongwa zvako zvekuenderera mberi, tsanangura zvauri kutarisira. Nekuda kweizvi, iwe unoratidza waanogona kushandira kuti iwe uve nechako zano uye uzive zvaunoda kuzadzisa mune ramangwana.
Mutemo unokosha - Ongorora data
Iyo nyanzvi yeCV inofanirwa kuvandudzwa pazvinhu zvinogara zviripo. Inofanirwa kuchinjirwa kune chaiyo yakanangana nebasa, ichisimbisa chimiro uye hunyanzvi hunodiwa neiye anogona kushandirwa.
Kutendeseka muDhaibha pamusoro pezvose zvevamwe
Hapana ruzivo rwenhema runogona kuverengerwa mukutangazve. Usaverengera hunyanzvi hwausina. Nhema ichauya pachena kana iko kugona kwakatsanangurwa na uchasimbiswa.
Chinobatsira - mudzidzisi weCV online
Anogadzira CV anogona kukubatsira kugadzirira yakakwana, inoverengwa kutangazve. Nekuda kwayo iwe hauzokanganwa nezvekuisa zvakakosha zvinhu mugwaro. Iwe zvakare uno chengetedza chikamu chayo chekuona. Rangarira kuti yako CV ipasa rako kuti uwane rako rekurota basa.
Nzira yekumira sei uye kugadzira CV yekutanga?
Iyo biography iyo iwe yaunopa kune waunoshandira inotaura zvakawanda pamusoro pako. Iwe unogona kuverenga kubva mairi kunyangwe iwe uchiteerera kune zvakadzama, kunyangwe uine chokwadi uye… kusika.
Izvo zvisingaiti zvekare zvekutsvaga muchengeti kana mukati wemugadziri anogona kukwezva kutarisa. Tarisa kuti unogona sei kuratidza unyanzvi kuburikidza nekushandisa, pakati pevamwe, panzvimbo yechechecheki, kubika kana kugadzira vhudzi.
Yepakutanga uye yakanaka-inotaridzika CV, kana chii?
Infographics, kutangazve muchimiro chefirimu vhidhiyo - mune mamwe maindasitiri anoshamisa biography inogona kutisiyanisa. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve nehanya uye ufunge kana mhinduro iyi ichave yakakodzera chaizvo.
Haasi wese achakwikwidza anofanira kusarudza unconventional CV. Usakanganwa kuti zvemukati zvakakosha kupfuura fomu. Mahunyanzvi mune iyo zvishoma kushinga uye kugona hazvizokuvadza, semuenzaniso:
Iyo nyanzvi yekushambadzira inotarisirwa kuve inokwanisa kukwezva mutengi. Kugutsa waunoshandira kuti unogona kutengesa nekusimudzira… kuzvisimudzira. Semuenzaniso, unogona kupa CV muchimiro chevhidhiyo clip.
Mukati Muumbiki CV
Kusika chinhu chakakosha zvakare kune vegadziri vemukati. Kana uchitsvaga basa mune iri basa, iwe unofanirwa kubheta pane inoshanda inoshanda pamwe neisina kujairika zvemukati mamiriro. Gwaro racho rinofanira kusanganisira mapikicha ehunyanzvi zvirongwa zvakapera.
Carer / mudzidzisi CV
Iwe uri mudzidzisi wemutauro wekunze unoitisa vana makirasi? Kana kuti pamwe urikukumbira basa semudzidzisi wepachikoro chekutanga? Iwe unogona kuratidza maitiro ekugadzira uye, semuenzaniso, gadzira CV muchimiro chemabasa emaoko (embroideries kana decoupage).
Kusika chinhu chakakosha zvakanyanya chinhu zvakare kune nyanzvi dzinozvipira pachavo kuonoorical art. Kuti uratidze hunyanzvi hwako, unogona kupa waunoshandira CV nemifananidzo yemidziyo yemidziyo yakagadzirwa maererano nekwako kwekutanga. Iwe unogona zvakare kuedza kunyora biography muchimiro che… bhuku rekubheka.
Kana kuti pamwe zvakakodzera kutumira waunogona kushandira keke hombe kwaunogona "kunyora" hunyanzvi hwako uchishandisa icing nechinangwa icho? Iwe unogona zvakare kubheka makuki nekushamisika maunoviga CV yako.
Ita-up artist / makeup artist CV
Iyo make-up yeiyo CV inogona kuve yakajeka uye inoshanda, asi panguva imwechete yakajeka uye yakajeka. Izvo zvakafanira kubatana kune iyo yekushandisa chinongedzo kune portfolio, mauri mushandirwi azokwanisa kuona, semuenzaniso, mafirimu pane iwe aunogadzira-kumusoro uye gadzira-up.
Mucheka wehove CV
Multimedia zvinhu zvinogona kusanganiswa neCV yako kana iwe uchikumbira nzvimbo yevashandi. Iwe unogona kuzvibvumira kuisa mufananidzo wako iwe kushanda pane dhidhiyo. Zvakakosha kuti kupikisa kune unyanzvi, kureva zvakanaka, kutemwa, nezvimwe.
Ita shuwa kuti kugona kwako hakuvanzi hunyanzvi. Yakakosha CV haingori yeisingakanganwiki, zvakare yakavimbika uye ine ruzivo rwakakosha nezve ruzivo, hunyanzvi uye zvinangwa zvehunyanzvi. Gadzira nyanzvi yekutangisa zvakare uchishandisa Pracuj.pl wizard.
Zvaunogona kunyora kuCV yako kana usina ruzivo
Kunyora CV ye basa rekutanga idambudziko rakakura kune vanhu vazhinji. Kuti uzviite nenzira kwayo, iwe unofanirwa kuwana iyo nguva uye kudzikamisa musoro wako - chinyorwa chinokubatsira iwe muzororo
Nhau dzakanaka dze kutanga - kazhinji zvezvinhu zvinodiwa kuti ugadzire kutenderera zviri mumusoro wako. Paunenge uchigadzira CV, iwe unofanirwa kusvika kune iyo nook uye crannies yeyeuko yako uye funga nezvako, Hupenyu hwako uye zviitiko zvehunyanzvi uye zvaunogona kuita uye zvaunofarira.
Tanga ne Dzidzo - Yakapedza chikoro
Muchikamu che "dzidzo", tinopfuurira kana kupedza zvidzidzo (bachelor, master, postgraduate studies, etc.) kana chikoro chekudzidzisa. Tinogona kuwedzera kuwedzera pano mashoko pamusoro pekunze kwekunze.
Hatipinde zvikoro zvakapfuura - chikoro chesekondari, junior high kana chikoro chekutanga. Zvinosarudzika zvichave zvikoro zvepamusoro, iro rine chimiro uye chinhanho chinoratidza chakawanikwa humwe hunyanzvi, semuenzaniso, chikoro chepamusoro chine hurukuro Spanish mutauro.
Unyanzvi hwepamusoro muCV
Kana iwe uchitova nebasa nebasa, tsanangura chaizvo izvo zvawakadzidza uye hunyanzvi hupi hwawakawana. Iwe unogona kuwana yako internship, internship uye zvisinganzwisisike mabasa neako ruzivo.
Nekudaro, kana iwe uchinge uchinge uchinge uine ruzivo hwakazara zvine chekuita nezvidzidzo zvako kana basa ramangwana, haugone kupinda mumabasa asina kujairika kana mwaka mune yako CV. Tarisa kutsanangura zvakapfuura kugona kwenyanzvi.
Basa rako panguva dzekudzidza kwako rudzi rwechiitiko chakawanikwa. Simbisai zvamakabudirira mune "Chikamu chekuwedzera" chikamu.
Simba nezvinodiwa muCV
Mukushambadzira kwebasa, hunyanzvi hwemhanzi hunyoro zvinodikanwa zvinonyanya kupihwa. Munhu rudzii kambani yakapihwa iri kutsvaga, iwe unogona zvakare kutora kubva kune yayo yesangano tsika uye uzivi, izvo zvinotsanangurwa mune Yevashandi Yevashandi tebhu uye zvakananga pane webhusaiti yakawanda webhu saiti nzvimbo muDubai uye Abu Dhabi.
Simba rako uye zvido zvako, zvinowirirana nezvitarisiro zveanoshandira, pinda muzvikamu zvakakodzera zveCV yako.
Mushure mekufunga pamusoro pako, nguva yasvika yekutora danho rekupedzisira, iro richakugadzirira kuti uite CV yakanaka. Itai zvinhu izvi, gara pasi kumakombiyuta uye ... makagadzirira :)!
Mufananidzo wechipfumi yeCV
Mufananidzo wakanaka weCV unoratidza mumiriri kubva pabendekete kumusoro, pane yakatsiga uye kunyemwerera. Iwe unofanirwa kupfeka shati kana yakatsiga, isina kwayakaremara blouse yemufananidzo bhizinesi. Rangarira mifananidzo yemhando yepamusoro. Kana iwe usati uine pikicha parizvino, usanetseka - unogona kutumira CV yako isina mufananidzo. Kuve pakutanga kwebasa rako, zvakakodzera kutora mufananidzo wakadai - zvichabatsira mune ramangwana. Unogona kushandisa masevhisi emutorwa mifananidzo kana kutora chikamu mune bhizinesi chikamu mahara, chinoitika chinowanzoitika chezviitiko zvevadzidzi kana faindi yebasa.
Matitikiti emakambani akapera, akagamuchira zvitikiti, zvikomborero uye zvakasiyana muCV
Unganidza idzo dzakanyatso kukura iwe uye uchave chinhu chinobatsira kune waunoshandira. Kana iwe uchirangarira zuva rekuguma kwekosi uye murongi, haufanire kutsvaga iko iko kwekutanga. Kana iwe usina chokwadi, zvino enda kune iwo akaunganidzwa magwaro.
Nyora misi uye mamiriro ezvinyorwa zvine kosi, kudzidziswa. Simbisa izvo zvinhu chaizvo kukudziridza iwe uye kunongedza hwako wakawana ruzivo.
Muenzaniso wakanaka weCV unosanganisira zita rekurovedza, sangano, zuva uye zvakasiyana-siyana zvawakatora pachikoro mu Dubai.
Nzira yekuwana sei chiitiko chekutanga uye kuwedzera CV yako?
Ndezvipi zvinokuvadza zvinopedzisira zvisingabhadhari zvine chokuita nokuwana basa rokutanga? Chii chiri ukama pakati pekutsvaga kune kambani yako yerota uye mabasa asina kuitika mukati mezororo?
Chii chakakosha kuronga chiitiko chekupa zvipo, mutambo wevadzidzi kana musangano wesainzi rebhizinesi? Zvinoitika kuti izvi zvese inoita basa rakakura! Vashandirwi vanokoshesa vatariri vanoshingairira, vakazvipira uye vakazara simba.
Ndezvipi zvikamu zvichanyanyisa CV yako mu Dubai?
Iwe une kujairika hunyanzvi kana zvaunofarira? Kana kuti pamwe wakunda mubairo mumakwikwi eindasitiri? Paunenge uchigadzira CV, ndapota zivisa waunogona kushandira. Ita shuwa kuti mufananidzo wako unoenderana negwaro rekunyoresa.
Ukawedzera kuziva uye kuziva, yakakura mikana yako yekuwana yako kurota basa. Izvo zvakakosha kuti iwe uzive nzira yekuburitsa iyo simba iwe unayo. Kuita kuti CV yako iwedzere kuratidzika, sanganisira zvinhu zvakadai s semuenzaniso, izvo zvakakosha muAFA.
Kupinda mumakwikwi epasi rose, kuwana mibairo yeindasitiri, kuitwa kwezvirongwa zvinonakidza, shanda pamwe chete nenyanzvi dzakanakisa - kutaura nezvezviitiko zvakadaro, iwe uchazviratidza sewe munhu kubatanidzwa mukuvandudza kwehunyanzvi. Izvo zvakakosha kuti ruzivo iwe rwaunopa runoreva kune izvo zvinodiwa nemushandirwi.
ChiJapan, Chinese, Koreya, Czech, Russian, Dutch - iyi mienzaniso yemitauro yekune dzimwe nyika iyo ruzivo rwakanyanya kushomeka pane kugona kushandisa, semuenzaniso, Chirungu. Kuziva mutauro wetaipi kunogona kuve chinhu chikuru uye wedzera mikana yako pamusika webasa.
Kuzvipira uye zvimwe zviitiko zvinoitwa kunze kwekushanda maawa.
Iwe unozvipira here mune hwaro? Kana kuti pamwe inguva yako yemahara, iwe unoronga zviitiko zvemitambo zvevana kana iwe unoita kuti ubatsirwe nenharaunda yemuno? Kutora zviitwa zvakadaro kunoratidza kuti unokwanisa kubatanidzwa uye nekunzwira tsitsi.
Izvo zvakare zvakanaka kutaura izvo zvido zvinokubatsira kukudziridza hunyanzvi. Chess inodzidzisa kufunga zvine musoro. Kufamba kwakanakira kudzidza mimwe mitauro. Kugadzira model kunopupurira kutsungirira, nezvimwe.
Zvakakosha kuti mhando iyo inotungamirira hupenyu hwako inoratidzirwa zvakanaka uye yakajeka. Kutenda neizvi, CV ichava yakajeka. Zviri nani kurasa mafonti akaita seCherier, Comic Sans kana Vivaldi. Iwe unogona kutengesa, somuenzaniso, Calibri kana Arial.
Kuisa mufananidzo mune gwaro kunoita kuti zvive nyore kune uyo anogamuchira kubatanidza zvaakabudirira nemumwe munhu. Professional Photography inogonawo kuita kuti gwaro rioneke zvirinani. Mufananidzo unogona zvakare kukukonzera kuti iwe urangarirwe kana, semuenzaniso, iwe unoratidzwa kwaari muT-shati ine hashtag: #task me.
Zvimwe zvifananidzo zvinoratidza
Icons yeCV, infographics, mutsara wenguva - kuratidza zvirimo munzira yemifananidzo uye zvirongwa zvinoita kuti zvive nyore kuwana ruzivo rwakakodzera, senge neruwadzano rwemhando, zvikwaniriso, nezvimwe. Dhirowa zvinogona kuita kuti gwaro riratidzike zvakanyanya. Panguva imwecheteyo, zvakakodzera kuyeuka kuti izvi zvirimo, kwete fomu yekutangisisa, ndizvo zvakakosha.
Inotanga muCV yako
Pasinei nemhando ipi yaunosarudza, CV yako inofanirwa kuve yakajeka uye pachena. Semuenzaniso, kana iwe uri kunyorera basa muindasitiri yemafashoni, unogona kushandisa Mishumo yePantone mune iyo inopisa mavara mune mwaka wakapihwa.
Batanidza zvitupa kuCV yako zvichiratidza kuti une hunyanzvi hwawakataura. Iwe unogona zvakare isa portfolio kana chinongedzo kune webhusaiti ine samples dzebasa rako.
Kugona kuverenga kupfuura zvose
Paunenge uchiisa zvimwe zvekugadzira muCV yako, chenjera. Biology inogona kuve inoshamisa uye kubuda kubva kune zvimwe zvinoshandiswa. Zvakakosha, zvisinei, kuti zvine mutserendende uye zvinobvumikisa zvakajeka kuti iwe uri mumiriri wakakodzera musarudzo.
Nzira yekunyora sei CV yemazuva ano muTsika yeEmirates?
Aesthetic, legible, nekusiyanisa uye ruzivo rwakananga pamusoro pemabasa akaitwa, uwandu hwenyanzvi dzomumwe mutauro uye humwe unyanzvi. CV yakadaro inofanira kugadzirirwa mugore idzva.
Gwaro harifanire kunge riine rekugadzira fomu yekukwezva kutarisa. Izvo zvakakosha kuti inopindura kunyanya kune izvo zvinodiwa zvakaiswa mune yekupihwa basa.
CV haifanire kureba. Ini ndicha bvunza rumwe ruzivo rwakadzama pamusangano wekugamuchira. Kuona iyo yakakosha ruzivo rwunoratidzwa pakutanga kwekutarisa - Ini zvechokwadi ndichagara kwenguva yakareba neakadai gwaro. Ini ndinotenda zvikuru kana maCV aripo inoenderana nebasa rekupa ini ndakaisa mune kushambadzira.
Ini zvino ndinoziva kuti mubvunzo uyu ari kuedza zvakaoma uye haatumizvezve zvekare kune chero zvipi zvayo, asi ari kutarisa zvakanyatsonaka kumushandi akakodzera.
Iwe unotarisa pane kukura? Iwe unozadzisa zvinangwa zvako here? Uri kuongorora yako nyanzvi yehunyanzvi? Iwe hauna kunetseka kuenderana nezvinzvimbo zvitsva here? Nyora nezvazvo muCV yako uchishandisa chaiwo mazwi.
Kuvonga neizvi, iwe uchazvipa iwe woita kuti mikana yako iwedzere. Zvakakosha kuti izvo iwe unonyora zvinotsigirwa nemuenzaniso, kureva zvinoreva kunyanzvi hwehutano uye zvinoratidza kuti iwe unyanzvi hunokosha hwevashandi.
Chii chinonzi CV pamusoro pomubatidzi?
CV yako inogona kukuzivisa iwe kuti uri munhu anokwanisa kuitisa, uine pfungwa dzisingawanzo uye inokurudzirwa kutevedzera zvirongwa zvako zvehunyanzvi. Kuti uzo yeCV yako kukupa chitupa chakanaka, usakanganwa nezve zvakakosha zvikamu zvakadai:
Kugadziridza ruzivo rwakatumirwa mu biography yako hakutombobuda mumafashoni. Paunotanga gore idzva, chengetedza CV yako uye wedzera hunyanzvi hunowanikwa nehunhu. Iwe unogona kuzviita kunyange iwe usinga tarise kushandura nzvimbo yako yebasa munguva pfupi iri kutevera. Iyo inzira yakanaka yekupfupisa rako kubudirira kwebasa mukati merimwe gore.
Zvakanaka kuti kana zita rekambani iyo mubhizimusi akashanda kana kuti akashanda, nyora chidimbu chemashoko mashomanana pamusoro pebhizimusi umo mushandirwi akashandisa, semuiti wezvigadzirwa kana muparidzi wefoni.
Ini ndoda kuverenga muCV nezve mabasa anoitwa nemumiriri kana kuita nevashandisi vekare uye zvinoenderana nebasa rangu rekupa. Iko hakuna chikonzero chekunyora kuti mumwe munhu aishanda seanomirira 15 makore apfuura kana iye zvino ari mumiriri wetivhisi yebasa.
Mifananidzo kubatana uye nyanzvi. Iwe unoda kuita fungidziro yakajeka kune angangove waanoshandira. Nekuda gadzira chiratidzo chako pachako. Iva anowirirana musarudzo dzehunyanzvi uye kukudziridza mune hwakananga nzira. Zvakare, chengetedza kuwirirana kwemagwaro ekunyorera uye kumwe kunobva ruzivo nezvewe. Pfungwa iripo ndeyekuti CV yako, tsamba yekuvhara, mbiri uye maitiro ako zvinopindirana.
Zvemukati zvinoratidzira "kukwikwidza kwemangwana". Unogona kushanda muchikwata, kuratidza hunhu hwekuita uye uine kugona kushandisa midhiya nyowani? Usakanganwa kuzvitaura muCV, kutsanangura yako yapfuura nyanzvi ruzivo uye zviitiko zvakaitwa.
Kugona kuverenga kweCV
CV grafiki dhizaini ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kuratidza zvinhu. Kana ichienderana nemufananidzo wako, unogona kuisa mifananidzo mugwaro kana kutsanangura chiitiko uchishandisa mutsara wenguva. Izvo zvakakosha kuti marapiro akadai ave neakanaka kwete chete pakukwezva asiwo pakuverenga kwenyaya yehupenyu. - Kana ndichiverenga CV, zvakakosha kwandiri kuti ruzivo rwakakosha kwazvo rwurimo ruratidzirwe kuratidzwa kuitira kuti ushandise zvakashinga uye pasi.
Uchokwadi hweCV yako muAFA
Usasvike chifananidzo chisinganyanyi kuwirirana neicho. Zvikurire iwe pachako, uvandudze unyanzvi hwako uye uve iwe.
CV yako yakaenderana ne zvinotarisirwa nemushandirwi?
Kugadzira gwaro rinoshamisa, rakanyanya kugadzira kunogona kukuunzira mapundutso, asi chete pasi pemamwe mamiriro. Rangarira izvozvo zvirimo uye kukosha kwaro kune zvinodiwa zveanogona kushandira mushandirwi yakakosha kupfuura fomu. Izvo zvakakoshawo kuti CV inoenderana nebasa iri. Kana iwe uri kunyorera chinzvimbo mudhipatimendi rekuverenga, zviri nani kudzivirira akapenya mavara uye mifananidzo yehunyanzvi.
Zvinhu zvakadaro zvicharatidzika zvisiri zvisikwa. Zvakanaka kumira kunze asi nenzira yakanaka. Panyaya yezviporofiti zvinoda kutendwa pamusoro pezvose, munhu anogona kutsauka zvishoma kubva pane akakundwa classics opfeka nzira dzakasimba dzekuratidzira, kutamba nemavara kana kuchinja magadzirirwo ezvinhu zvemukati.
Kana uchitsvaga basa, zvakakodzera kuvhurwa nemidziyo yemazuva ano uye kuishandisa. Semuenzaniso, unogona kuwana mukana wePracuj.pl mbozhanhare application, iyo inokutendera kuti upindure ipapo pane izvo zvinopihwa uye zvinokupa mukana wekutarisa chimiro chechishandiso chako.